Calanka Habar Jeclo
Hargeysa, 10 Feb 2014(Alldhooftinle.com)
Maalmahana Waxaa Seylada Lagu Kala Iibsado Xildhibaanada Somaliland Laga Dareemayaa Sicir Barar. Qiimahooda Oo Aad U Kala Sareeyaa Wuxuu Ku Xidhan Yahay Hadba Qolada Xildhibaankaasi Ka Soo Jeedo.
Tan iyo markii uu Siilanyo la wareegay talada dalka, waxaa soo badanayey sed bursiga Beesha Siilaanyo Ee Habar-Jeclo ay ku hayso beelaha kale. Beesha Habar-Yoonis iyadu hadda quus ayeyba ka taagan tahay Xukuumada Siilaanyo.
Waxaa beryihii danbe oo dhan ka socotay Magaalada Burco, in dhamaan Wakiilada Xukuumada Siilaanyo u fadhiyey ay Beesha Habar-Jeclo oo keli ahi isku koobtay, ayna ka sii yaraanayeen Maamulka Burco Beelihii kale oo hore Maamulka wax uga heli jiray. Ku darso in Maamulka Burco hore loo qaybsan jiray si caddaalad ah oo dhammaan Beelaha wada degaa ka dhex muuqdaan.
Sheekadii Xirsi Toorile kaga soo badiyey Burco ee laaluushka ayaa iminka Hargeysa ka socota, waxayna noqon doontaa taariikhda wax laga sheekeeyo haddii Cirro laga qaado Golaha Wakiilada, sababtoo ah jagada Cirro waa Mansabka keliya ee Habaryooniseysan ee Beesha Habar-Yoonis ay ku leeyihiin Qaranka Somaliland.
Waxa suurtagal ah haddii Cirro laga adkaado iney dhammaantood Beesha Habar-Yoonis kalsoonida kala noqoto Maamulka Somaliland iyo weliba iney isku wada shubaan Muqdisho iyagoo qabiilka Dirka la yiraahdo sheeganaya.
Todobaadkii Tegay ayey ahayd markii Xirsi Toorile uu dhammaan Xildhibaanada Somaliland ku baayacay Lacag badan, si ay ula ridaan Cirro oo Gudoomiye ka ah Golaha Wakiilada, waxaana la sheegayaa inuu iminka haysto tiro dhan ilaa 55 Xildhibaan, kuwaas oo saameyn weyn ku yeelan kara Golaha Xildhibaanada si loo rido ama loo inqilaabo Cirro.
Maalmahana waxaa Seylada Xildhibaanada Somaliland gaadheen qiime aad u sareeya, iyagoo lagu kala iibsanasyey qiime aad u kala sareeya, waxaana la soo weriyey in:
Xildhibaanka Beesha Habar-Yoonis la siinaayo Lacag dhan $10.000, halka kuwa Habar-Jeclo iyo Habar-Awal la siinaayo $5,000 waayo iyagu dawladda waa iney qabyaalad ugu hiiliyaan.
Beelaha Dhulbahante, Gedabursey iyo Warsangeliga iyaga waxa lagu baayacayaa qiime jaban oo ah ilaa iyo $3000, waayo iyagu waa boosh oo waafi maaha.
Isku soo wada duuboo Lacagtaas Laaluushka loo bixinaayo ayaa loo malaynayaa inay tahay Lacagtii lagu dhisi lahaa Wadada isku xidhaysa Burco ilaa Ceerigaabo oo uu Xirsi Toorile Gudoomiye ka ahaa.